कोविडबाट उन्मुक्ति तर्फ युरोप ? :: NepalPlus
कोविडबाट उन्मुक्ति तर्फ युरोप ?
नेपालप्लस संवाददाता / फ्रान्स२०७८ माघ २१ गते २२:२८
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार युरोप अब कोविड-१९ महामारीको अन्तिम खेल बाट बाहिरिने क्रममा प्रवेश गरिरहेको छ ।
डब्ल्यूएचओ युरोपका निर्देशक डा हान्स क्लुगेले बिहीवार एक प्रेस ब्रीफिंगमा युरोपमा कोरोना भाइरसको मृत्युको संख्या न्युन हुन थालेको बताएका थिए ।
डा क्लुगेले यो ओमिक्रोन भेरियन्टको कम गम्भीरताका कारण हुन सक्ने र गर्मी मौसमले भाइरस फैलाउन गाह्रो बनाउँने बताएका छन् ।
“म गत हप्ता गरेको आग्रहलाई दोहोर्याउन चाहन्छु जसले वास्तवमा महामारीको लागि एक खेललाई प्रशंसनीय तरिकाले अन्त्य गर्दै छ । यो अब सबै सकिएको छ भनेर भन्नको लागि होइन । तर युरोपेली क्षेत्रमा यसको प्रशारणमा नियन्त्रको एकल अवसर छ भनेर जोड दिन चाहन्छु” उनले भने ।
तर डब्ल्यूएचओले देशहरूलाई भाइरस विरुद्ध नागरिकहरूलाई खोप दिन जारी राख्न आग्रह गरेको छ ।
जबसम्म विश्वको अधिकांश जनसंख्यालाई खोप दिइँदैन कोरोना भाइरसले फैलिने माध्यमहरू जारी राख्नेछ । घातक र थप संक्रामक रूपहरूमा उत्परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले बारम्बार चेतावनी दिंदै आएका छन् ।
स्पेन जस्ता केही देशहरूले कोविड-१९ अब एक स्थानीय समस्या हो र यसलाई मौसमी फ्लू जस्तै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ कि भनेर विचार गरिरहेका छन् ।
अरू मुलुक जस्तै चेक गणतन्त्र र इटाली आउने हप्ताहरूमा केही प्रतिबन्धहरू कम गर्ने योजनामा ​​छन् ।
युरोपक अकेहि मुलुकले स्वास्थ्य प्रतिबन्धहरु खुकुलो पार्न लागेपछि मंगलवार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशकले देशहरूले कोविड-१९ मा विजय घोषणा गर्न यो धेरै चाँडो भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस डा अधानोम गेब्रेयससले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए “अधिक प्रसारण भनेको धेरै मृत्यु हो ।”
गत हप्ता डब्ल्यूएचओको युरोपेली क्षेत्रमा एक करोड २० लाख कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरू थिए जुन महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी भएको हप्ता हो ।
अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन भेरियन्ट थियो । तर अस्पतालका सघन उपचार कक्षहरूमा भर्ना हुने विरामीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन ।
ईयुद्वारा कोविड प्रमाणपत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव
डब्ल्यूएचओको घोषणा हुंदाहुँदैपनि युरोपेली आयोगले कोभिड-१९ प्रमाणपत्रको प्रयोग एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्ताव अन्तर्गत ईयु ब्लकभरि यात्राको लागि स्वास्थ्य पासहरू जुलाई २०२३ सम्म मान्य रहने छन् ।
“यस चरणमा सन् २०२२ को दोस्रो आधामा संक्रमणको सम्भावित वृद्धि वा नयाँ भेरियन्टहरूको उदयको प्रभाव निर्धारण गर्न सम्भव छैन” आयोगले भन्यो ।
न्यायका लागि ईयु आयुक्त डिडियर रेन्डर्सले योजना विस्तार नगर्ने तर यो बेला महामारी समाप्त नभएको खण्डमा म्याद समाप्त भए त्यसले अप्ठेरो बनाउन सक्ने र महामारी वा कुनै अर्को भेरियन्ट फैलिएमा असफल र अवरोधहरू निम्त्याउन सक्ने औंल्याएका छन् ।
यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ईयु सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
फ्रान्स, डेनमार्क र स्वीडेनले प्रतिबन्ध हटाए
उच्च संख्यामा संक्रमणको बाबजुद एन्टि-कोविड प्रतिबन्धहरू बुधवारबाट हटाउन सुरु गर्ने सबैभन्दा नयाँ युरोपेली देश बनेको छ फ्रान्स ।
फेस मास्कहरू अब बाहिर अनिवार्य हुनेछैन । स्टेडियमहरू, सांस्कृतिक स्थलहरू र बाहिरी ठाउँहरूमा भेला हुन संख्या तोकिएको छैन ।
इनडोर कन्सर्ट हलहरूमा पहिले २,००० जना मात्रै प्रवेश गर्न पाउने नियम थियो । बाहिरी क्षेत्र (आउटडोर) क्षेत्रहरूमा ५,००० जना ​​सीमित गरिएको थियो । तर यो प्रावधानलाई हाल हटाई एको छ ।
तर फ्रान्सेली नागरिकहरूले अझै पनि बार, रेस्टुरेन्ट, अन्य स्थानहरूमा प्रवेश गर्न र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न खोप वा रिकभरीको प्रमाण चाहिन्छ । फ्रान्समा नाइटक्लबहरू फेब्रुअरी १६ सम्म बन्दनै गर्नुपर्ने छ ।